Deni oo ku booriyey bulshada in ay ka qayb qaataan horumarka dalka
GAROWE, Puntland - Madaxweynaha Dowladda Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka qayb-galay munaasabad ay degmada Garoowe Kula Wareegaysay Sadex Dab-Damis iyo booyad biyo Shirkadda isgaarsiinta ee Golis.
"Dawladdu waa dadka, dadkana inay isku tashadaan waa wax waajib ku ah, hadaysan dabka iska damin oo colaadda iska damin oo gaajada la dagaalamin oo dhibaatooyinka kale ee bini'aadamka ku soo wajahan meel ugu soo wada jeesan, ogaada dad gaar ah wax ma gaarayaan ee bulshadoo dhan ayay gaarayaan, marka in dadku isku tashado oo dowladda oo dadka ka mid ah danaha guud ka shaqayso waa muhiim". ayuu yiri Madaxweynaha Puntland
Hogaamiyaha Puntland ayaa cod dheer ku qeexay in "aan lagu cabsi gelin karin" fulinta waajibaadka loo doortay.
Deni oo isbedel ku sameeyay qaar kamid ah hay'addaha Puntland
Puntland 04.07.2019. 19:13
Deni oo furay kal-fadhiga 44-aad ee Golaha Wakiillada Puntland
Puntland 15.06.2019. 14:00
Deni oo Garowe ka daah-furay Shirka Kalluumaysatada Soomaaliyeed
War Saxaafaded 29.04.2019. 13:34
Deni oo soo xiray shirka jihaynta siyaasadda xukuumadda [Sawirro]
Puntland 14.03.2019. 17:31
Guddiga qaban-qaabada Shirka Wada-tashiga Puntland oo la magacaabay
Puntland 18.02.2020. 15:34